Ukuhlaziywa kokugqibela: Jan 05, 2021 Gamepron. ("Thina", "thina", okanye "wethu") isebenza kwiwebhusayithi yeGamepron ("Inkonzo").
Sisebenzisa iiNkcukacha zakho zobuqu ukubonelela kunye nokuphucula iNkonzo. Ngokusebenzisa iNkonzo, uyavuma ukuqokelela kunye nokusetyenziswa kolwazi ngokungqinelana nalo mgaqo-nkqubo. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kulo Mgaqo-nkqubo wabucala, amagama asetyenziswe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala aneentsingiselo ezifanayo nakwiMiqathango neMiqathango yethu, efikelelekayo ku-https: //gamepron.com